Waxaad hadda arki kartaa trailer -ka loogu talagalay The Velvet Underground oo la tababari doono Oktoobar 15 | Waxaan ka imid mac
Waxaad hadda arki kartaa trailer -ka Velvet Underground -ka oo la tababari doono Oktoobar 15
Sannad ka hor, Apple wuxuu la wareegay xuquuqda telefishanka ee The Velvet Underground si loo awoodo in lagu daro dukumintiga Apple TV +. Oktoobar 15 -keeda soo socota ayaa noqon doonta tii ugu horreysay ee adduunka oo dhan oo la xuso, shirkaddu waxay ku baahisay kanaalkeeda rasmiga ah ee YouTube -ka trailer ugu horeysay ee documentary ah.
Velvet Underground waxaa haga Todd Haynes oo raaca bilowga kooxda oo sahamiya sumadda aan la tirtiri karin ee ay kaga tagtay goobta muusigga. In trailer daqiiqado laga soo qaaday dokumenteriga ayaa la arkay, iyagoo baaraya bilowgii kooxdii ka dhacday isgoyska farshaxanka tijaabada ah, muusigga, iyo filimka intii lagu jiray isbeddelka dabaylaha dhaqanka ee jiray 60 -yadii.
U sheeg sheekada waraysiyo gaar ah oo taxane ah oo lala yeeshay xubnihii ka badbaaday kooxda: John Cale iyo Moe Tucker. Iyo sidoo kale faallooyinka fannaanka Jonathan Richman, qoob -ka -ciyaarka Qarxinaya Caagga, Lama -lamaanaha Mary Woronov, iyo kuwo kale. Filimka oo dhan oo dhex -dhexaad ka ah ayaa ah muuqaallo aan hore loo sii shaacin oo laga soo qaatay bandhigyo iyo filimo Andy Warhol. Lou Reed ayaa u muuqda inuu door muuqda ku leeyahay documentary -ga, oo ay weheliyaan koox -kooxeedyo iyo in badan oo ka faalloonaya sida uu u wajahayo dhagaxa.
Velvet Underground wuxuu abuuray cod cusub oo beddelay dunida muusigga. Isku -dubarididda booskooda mid ka mid ah kooxaha ugu qaddarinta badan dhagaxa iyo duudduuban. Tusaha Todd Haynes, oo uu ku hagayo ruuxa avant-garde ee waqtiga, taariikhdan kaleidoscopic afka wuxuu isku daraa waraysiyo khaas ah iyo kaydad dhalaalaya.
Tilmaanlaha wuxuu ku hoos qoran yahay astaanta 'R'. Taas macnaheedu waa in carruurta ka yar 17 sano aysan arki karin haddii uusan la socon qof weyn. Waxay u muuqataa in tobankii sano ee 60 -meeyadii iyo dhammaan xanta iyo sheekooyinka laga sheego agagaarka taariikhahaan, ay aad uga naxeen kooxdan iyo bulshada inteeda kale.
Oktoobar 15, waxaa laga sii dayn doonaa Apple TV + iyo tiyaatarada labadaba. Waa hubaal inaysan cidna ka tagin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Alaabada Apple » Apple TV » Waxaad hadda arki kartaa trailer -ka Velvet Underground -ka oo la tababari doono Oktoobar 15
macOS 12 Monterey beta, watchOS 8 iyo tvOS 8 beta 15